Zon'olombelona · Septambra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Septambra, 2021
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Septambra, 2021
Karaiba 23 Septambra 2021
Raha tsy migadra amin'ity fanamelohana faharoa ity i Bouterse, dia maro ireo mahita azy ho mpamono olona tsotra izao.
Azia Atsinanana 23 Septambra 2021
Tondroin'ny seha-baovao Pro-Beijing ho mpitsikilon'ny vahiny ny Konfederasionan'ny Sendikà, izay mety ho fanitsakitsahana Lalànan'ny Filaminam-Pirenena.
Azia Afovoany sy Kaokazy 21 Septambra 2021
Niteraka adihevitra vaovao momba ny fankahalana pelaka, ny tantaran'ny tovovavy niova fananahana iray novonoina tamin'ny volana Aogositra, ny tsy fisian'ny fepetra fiarovana ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+, ary ny tsy fahombiazan'ny governemanta amin'ny fandraisana andraikitra.
Azia Atsinanana 18 Septambra 2021
Eo an-dalam-paharavana ny Hong Kong Alliance, vondrona mpanohitra mpikatroka, taorian'ny fisamborana ireo atidohan'ny mpikambana ao aminy, izay mbola mikiky ihany koa ny sisa tavela amin'ny demaokrasian'i Hong Kong.
Azia Atsinanana 15 Septambra 2021
"Tiako ho fantatry ny olona fa tsy fihetsika lafo vidy ny fanehoana firaisankina. Azo atao amin'ny fomba maro izany raha tsy mametra ny tenanao ianao."